Wednesday October 21, 2020 - 18:19:02 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ciidamada Melleteriga Kenya ee loo yaqaan KDF ayaa bilaabaya isku diyaarinta qorshihii ay uga bixi lahaayeen dalka Soomaaliya kadib duullaan 9 sana jirsaday oo ay ku joogeen dalkan muslimka ah.
ciidanka Kenya ayaa Soomaaliya kusoo duulay sanaddii 2011
Warbaahinta maxalliga Kenya oo soo xiganaysa mas'uuliyiin katirsan wasaaradda difaaca ayaa sheegtay in ciidamada Melleteriga ee ku sugan Soomaaliya lasoo saari doono inta lagu guda jiro sanadda 2021-ka.
Wargeyska The Star ee kasoo baxa magaalada Nairobi ayaa shaaca ka qaaday in saraakiisha ciidamada AMISOM qorshaynayaan in ciidanka Kenya ay noqdaan kuwa ugu horreeya ee isaga baxaya Soomaaliya iyadoo qeyb soo gabagabeynta howlgalka Midowga Afrika.
Warbixinta uu daabacay Wargeyska ayaa xustay in taliyaha cusub ee ciidanka KDF Jeneraal Robert Kibochi uu booqasho ku tagay Soomaaliya uuna usheegay saraakiisha Kenyaatiga ah in ay isku diyaariyaan bixitaan.
"Waxaad tihiin madaxa fallaarta waana inaan fiiqnaa madaxa fallaarta, shaqadaas waxaan u istaagi doonaa marka aan idin siinno qalab ku habboon oo aad ku gudan kartaa waajibaadkiinna" sidaas waxaa yiri Jeneraal Robert Kibochi.
Sida lagu yaqaan dowladaha ay ciidamadoodu duullaanka ku joogaan Soomaaliya marka ay damacsanyihiin dib ugurasho ayay dalka soo geliyaan ciidamo dheeraad ah iyagaa ka cabsi qaba halis uga timaad jihaadiyiinta Al Shabaab.
Dhinaca kale Ergeyga gaarka ah ee Midowga Afrika uqaabilsan Soomaaliya ahna madaxa AMISOM Francisco Madeira ayaa dhowaan kulan la qaatay xubnaha golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika waxaana kulankaas ku weheliyo Abaanduulaha AMISOM Jeneral Diomedi Ndijia,mas'uuliyiinta ayaa xubnaha golaha siiyay warbixin ay ku caddahay sida saraakiishu ugu diyaar garoobeen ka bixitaanka ciidamada AU ee Soomaaliya.
Saraakiisha AMISOM waxay walaac ka muujiyeen halista wali uga imaanaysa Al Shabaab iyagoo bidhaamiyay in ciidamada dowladda Federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada aysan udiyaarsanayn lawareegidda amniga Soomaaliya.
Wargeyska The Star wuxuu warbixintiisa ku sheegay in qorshaha kabixitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya uusan noqon doonin hal mar balse uu mari doono maraaxil kala duwan sababa laxiriira Dowladda Federaalka oo aan laheyn awood ay ku difaacato magaalooyinka muhiimka ah sida caasimadda Muqdisho iyo magaalooyin xarumaha u ah maamul goboleedyada.
Waxa loogu yeero beesha caalamka oo 13-kii sano ee lasoo dhaafay tababar iyo qalabeyn siinaysa maleeshiyaadka DF-ka ayaa ka niyad jabsan in maleeshiyaadkaas ay lawareegi karaan magaalooyinka iyo deegaannada ay faarujin doonaan ciidamada AMISOM.
Isha warka The Star Kenya